Jenezy 17 - Ny Baiboly
Jenezy toko 17
Fanekem-pihavanana vaovao - Ny nampanaovana ny famorana.
1Nony efa sivy amby sivy folo taona Abrama dia niseho taminy Iaveh ka nanao taminy hoe: Izaho no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra; mizora eo anatrehako ary aza manan-tsiny hianao; 2hanorina ny fanekeko aminao aho, sady hahamaro tsy hita isa anao. 3Dia niankohoka tamin'ny tany Abrama ary Andriamanitra niteny taminy nanao hoe: 4Ny amiko dia izaho no fanekeko aminao: Hianao dia ho tonga rain'ny firenena tsy hita isa, 5ary ny anaranao dia tsy hatao hoe Abrama intsony, fa hatao hoe Abrahama, satria hataoko rain'ny firenena tsy hita isa hianao. 6Hampitomboiko dia hampitomboiko hianao, hataoko firenena maro hianao, ary hisy mpanjaka avy aminao. 7Manao fanekena aminao aho, aminao sy amin'ny taranakao, hanaraka anao amin'ny taona mifandimby, dia ho fanekena maharitra mandrakizay, mba ho Andriamanitrao aho, sy ho Andriamanitry ny taranakao handimby anao. 8Homeko anao sy ny taranaka handimby anao ny tany izay ipetrahanao izao mbola vahiny izao, dia ny tany Kanaana manontolo hananany azy mandrakizay, ary izaho no ho Andriamanitr'izy ireo.
9Hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama: Ny aminao kosa, hitandrina ny fanekeko hianao, dia hianao sy ny taranakao amin'ny taona mifandimby. 10Ka ny fanekena hotandremanareo, izay ifanekeko izaho sy hianareo sy amin'ny taranaka handimby anao, dia izao: Hoforàna avokoa ny lehilahy eo aminareo. 11Hifora amin'ny nofonareo hianareo; ary izany no ho mariky ny fanekeko aminareo. 12Vao teraka havaloana ny zazalahy eo aminareo amin'ny taona mifandimby, dia hoforàna izy; na ny teraka ao an-trano, na izay novidim-bola tamin'ny olon-kafa na iza na iza, izay hafa firenena aminao. 13Tsy maintsy foràna avokoa ny lehilahy, na ny teraka ao an-trano, na ny novidim-bola, ka dia ho eo amin'ny nofonareo ny fanekeko, ho fanekena mandrakizay. 14Raha lehilahy tsy noforàna tamin'ny nofony, dia hoesorina amin'ny fireneny, fa nivadika ny fanekeko.
15Hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama: Ny vadinao Saray tsy hataonao Saray intsony ny anarany fa Sarà no anarany. 16Hasiako soa izy, ary izy koa hampiterahako zazalahy aminao. Hasiako soa izy ho tonga firenena maro, ary hisy mpanjakam-pirenena avy aminy. 17Niankohoka tamin'ny tany Abrahama sady nihomehy nanao anakampo hoe: Lehilahy efa zato taona va ka dia mbola hiteraka indray! Ary Sarà, vehivavy efa sivy folo taona ve ka dia hiteraka! 18Dia hoy Arahama tamin'Andriamanitra: Enga anie ka ho velona eo anatrehanao Ismaely! 19Hoy Andriamanitra: Eny, hitera-dahy ho anao Sarà vadinao; hataonao hoe Isaaka no anarany; ary hanao fanekem-pihavanana aminy aho, dia fanekena mandrakizay ho an'ny taranany hanaraka azy. 20Ny amin'Ismaely dia efa nihaino anao aho, ka efa nitso-drano azy aho; hataoko maro anaka izy, ary hampitomboiko be indrindra. Hiteraka andriana roa ambin'ny folo izy, ary hotongaviko ho firenena lehibe. 21Ny fanekeko anefa dia haoriko amin'Isaaka, izay haterak'i Sarà, vadinao, ho anao, raha avin-taona toy izao. 22Nony tapi-niteny tamin'i Abrahama Andriamanitra dia niakatra izy niala teo aminy.
23Dia nalain'i Abrahama Ismaely zanany, mbamin'ny ompikeliny rehetra sy izay rehetra novidiny vola, dia ny lahy rehetra tamin'ny olona ao an-tranony, ka noforany androtr'izay ihany, araka ny nandidian'Andriamanitra azy. 24Efa sivy amby sivy folo taona Abrahama tamin'izy noforàna; 25ary efa telo ambin'ny folo taona Ismaely tamin'izy noforàna. 26Noforàna androtr'izay avokoa Abrahama sy Ismaely zanany, ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony, na ny ompikeliny na izay novidim-bola tamin'ny olona hafa firenena, dia samy niara-noforàna taminy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0319 seconds